Latte Dock 0.10 inouya nekuvandudzwa kukuru kwemadhoko, kugadzirisa uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Latte Dock 0.10 inouya nekuvandudzwa kukuru kwedoko, kugadzirisa uye nezvimwe
Mushure memakore maviri ebudiriro kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yepaneru Latte Dock 0.10, Uye ndezvekuti iyi vhezheni itsva yeLatte inouya nenhamba yakawanda yekuvandudzwa, shanduko uye kunyanya nezvitsva zvitsva zvatingawana kugadzirisa mune nhaurirano, pamwe nerutsigiro rwekukwanisa kufamba, kuteedzera nekunamatira madoko uye mapaneru, pakati pezvimwe zvinhu zvimwe.
Kune avo vasingazive neLatte Dock, ivo vanofanirwa kuziva kuti iyi iDock inopa iyo yakashongedzwa uye yakapusa mhinduro kugadzirisa mabasa uye plasmoids. Kusanganisira mhedzisiro yekuwedzera kwechimiro pane macOS-dhizaini mifananidzo kana iyo Plank pani. Kunze kweizvozvo zvakare inotsigira iyo mhedzisiro mhedzisiro yemacOS dhizaini mifananidzo kana iyo Plank bar. Iyo Latte pani yakavakirwa pane iyo KDE Maumbirwo masisitimu uye iyo Qt raibhurari. Kubatanidzwa neiyo KDE Plasma desktop inotsigirwa.
Iyo purojekiti yakavambwa nekuda kweiyo kusanganiswa kwemapaneru akafanana: Iye zvino Dock uye Candil Dock. Mushure mekubatana, ivo vanogadzira vakaedza kusanganisa chirevo chakatsanangurwa muCandil yekuumba rakasiyana pani, vachishanda zvakasiyana nePlasma Shell ine mhando dhizaini dhizaini uye Iye zvino Kneck vachishandisa chete KDE nePlasma maraibhurari asina wechitatu-bato kutsamira.
Iyo Latte pani yakavakirwa pane iyo KDE Plasma fomati uye inoda Plasma 5.12, KDE Mapurani 5.38 uye Qt 5.9 kana nyowani vhezheni kuti ishande. Iyo purojekiti kodhi inoparadzirwa pasi peGPLv2 rezinesi.
Main nyowani maficha eLatte Dock 0.10
Mune iyi vhezheni itsva iyo inoratidzwa yeLatte Dock tinogona kuwana shanduko zhinji maringe neshanduro yayo yapfuura (Latte Dock 0.9), asi imwe yeaya anonyanya kumira uye iyo ingangodaro iri yakakosha ruzivo yeiyi vhezheni ndiyo Tsigiro yemadoko anotenderera uye zvakare mapaneru iwe aunogona kuenda kune chero chikamu cheiyo skrini, pamwe neiyo Tsigiro yemadhokisi mazhinji uye mapaneru pamucheto chaipo pechidzitiro, pamwe ne Tsigiro yemazhinji maLatte mabasa pane imwechete pani kana base.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi yeLatte Dock 0.10 ndiyo rutsigiro rwakawedzerwa kuitira kuti mu mapaneru anogona kufambiswa, kunamirwa uye kuteedzerwa zvinhu kuburikidza clipboard, pamusoro peiyo tsigiro yemapop-up mapaneru akawedzerwawo.
Kune rimwe divi, ivo vanogadzira vanosimbisa izvo marongerwo emabhokisi ebhokisi akachinjwa kudzora nzvimbo yezvinhu padhibhodhi, nawo mushandisi ane mukana wekutsanangura yake yega scheme scheme kune yega dhizaini dhizaini.
Tambien kuendeswa kweruzivo nezvejometri kwakapihwa kubva kumaLatte Dock mapaneru kuenda kuPlasma desktop, pamwe nekuchinjisa dhata pane inoonekwa nzvimbo kune mamaneja emahwindo anotsigira GTK_FRAME_EXTENTS yekumira kwakaringana kwemahwindo.
Kunyangwe dialog yakavakirwa-mukati mukati mekutakura nekuwedzera majeti (Widget Explorer) yakawedzerwa, iyo inogona kushandiswa munzvimbo dzisiri dzeKDE, kusanganisira GNOME, Cinnamon, uye Xfce. Zvakare neiyo kugona kuburitsa kwakarongedzwa kwepadenga chinhu dhizaini uye shandisa madhibhodhi setemplate kuitazve fomu imwechete kune vamwe vashandisi.
Yeimwe shanduko izvo zvinoratidzika kubva pane iyi nyowani vhezheni:
Wakawedzera kugona kugadzirisa iyo fillet radius yemakona emakona uye nekuona saizi yemumvuri wepaneru.
10 mapaneru maitiro ekuonekwa anopiwa.
Nzira nyowani yemapaneru epamberi kuti aoneke sekukumbirwa, mune iro panhivi rinowoneka uye rinonyangarika chete mushure mekuita kwevashandisi nemaapplet, zvinyorwa kana mapfupi ekunze.
Tsigiro yekuisa maLatte Tasks maapplet pane rimwe pani.
Wakawedzera nyowani yekumisikidza modhi yeapplet mune iyo pani.
Iyo mhedzisiro mhedzisiro yekumisikidza maapplet mupaneru yakaitwa.
Tsigiro yeKDE Plasma muganho wenzvimbo dzinoparadzanisa (MarginsAreaSeparators) kubvumira zvidiki zvidiki.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kugona kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo mu chinotevera chinongedzo. Nepo kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni, vanogona kuzviita kubva iyi link
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Latte Dock 0.10 inouya nekuvandudzwa kukuru kwedoko, kugadzirisa uye nezvimwe
Google yakadzinga vashandi vangangoita makumi masere nekuda kwekuburitsa data revashandisi nedata rega kune vanhu vari kunze kwekambani
Krita 4.4.7 yauya chete kugadzirisa zvipembenene zvinomwe